Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » Isiphithiphithi sangoLwesihlanu omnyama eLondon njengoko abaqhubi beTube bebetha
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ukuhamba kuphazamise iinkonzo eLondon ngolwesihlanu oluMnyama, yenye yezona ntsuku zixakekileyo zokuthenga enyakeni, kunye neentengiso eziqhutywa kwiivenkile ezininzi.
Abaqhubi bakaloliwe baseLondon abaphantsi komhlaba babambe uqhankqalazo olukhulu ngolwesiHlanu oluMnyama, besithi uhambo lubangelwe "kukukrazulwa kwezivumelwano ezikhoyo kunye namalungiselelo okusebenza kwangaphambi kokuvulwa kweNight Tube."
Traffic kwiinqununu ezintlanu London Imigca yeTube - Central, Jubilee, Northern, Piccadilly kunye neVictoria - iye yachatshazelwa luqhankqalazo olulungelelanisiweyo namhlanje, ngelixa isiphithiphithi ngakumbi kwinkqubo yothutho ye-capital yaseBritane kulindeleke ngempelaveki.
Ngokwe-Rail Maritime and Transport Union (RMT), ekhokele ugwayimbo, uninzi lwamalungu ayo ebenganelisekanga ziindlela zeshifti ezintsha.
Ezothutho eLondon (TfL), iqumrhu loluntu elijongene nezithuthi zikawonke-wonke zesixeko, livakalise ukuphoxeka kwalo ngesigqibo se-RMT. Kwingxelo, I-TFL uthe uluhlu olutsha lwaziswa kubaqhubi beTube ngo-Agasti kwaye lubandakanya inani loqinisekiso kubasebenzi malunga nokhuseleko lomsebenzi.
I-walkout iphazamise iinkonzo ngaphesheya London ngolwesihlanu olumnyama, yenye yezona ntsuku zixakekileyo zokuthenga enyakeni, kunye neentengiso eziqhutywa kwiivenkile ezininzi. Abanye babathathi-nxaxheba boqhankqalazo baye babonwa bechwechwela kwizikhululo bephethe iibhanile kunye neeflegi.
Londonusodolophu naye uthethe ngokuchasene nokuhamba. "Esi senzo sogwayimbo singafunekiyo se-RMT sibangela ukuphazamiseka okuxhaphakileyo kwizigidi zabantu baseLondon kwaye siza kubetha abathengisi baseLondon, inkcubeko kunye nokwamkela iindwendwe ngelona xesha libi kakhulu," utshilo uSadiq Khan kuTwitter.
Uqhankqalazo luza kuqhubeka ngoMgqibelo, kucwangciswe ukuba kuhanjwe abantu abaninzi xa kusondele iKrisimesi.
“Abathengi abafuna ukuhamba besebenzisa I-TFL Iinkonzo ziyacetyiswa ukuba zijonge phambi kokuba zihambe, zivumele ixesha elingakumbi lohambo lwabo, kwaye zihambe ngamaxesha azolileyo apho kunokwenzeka, ”utshilo uTfL, esongeza ukuba abantu baseCentral. London bayacetyiswa “uhambe, uhambe ngebhayisekile okanye usebenzise i-e-scooter yokurenta” endaweni yokusebenzisa iTubhu.